Teny tsara indrindra avy amin'i Marcus Aurelius - Victor Mochere
Marcus Aurelius Antoninus dia emperora romanina nanomboka tamin'ny 161 ka hatramin'ny 180 ary filozofa Stoika. Izy no farany tamin’ireo mpanapaka fantatra tamin’ny anarana hoe Emperora Dimy Tsara (teny noforonin’i Niccolò Machiavelli, 13 taonjato teo ho eo tatỳ aoriana), ary ny emperora farany teo amin’ny Pax Romana, izay vanim-potoana nilamina sy nanjakan’ny Empira Romana nanomboka tamin’ny 27 T.K. hatramin’ny 180 am.f.i. Izy no consul romanina tamin’ny taona 140, 145, ary 161.
Taorian’ny nahafatesan’i Antoninus tamin’ny 161, dia nandray ny seza fiandrianana niaraka tamin’ny rahalahiny nitaiza azy i Marcus, izay nanjaka tamin’ny anarana hoe Lucius Verus. Teo ambany fitondran’i Marcus, dia nahita ady ara-tafika mafy ny Empira Romana. Tany Atsinanana, ny Romanina dia nahomby tamin'ny ady tamin'ny Fanjakana Partiana nohavaozina sy ny Fanjakan'i Armenia mpikomy.
Resin'i Marcus ny Iazyges Marcomanni, Quadi ary Sarmatian tamin'ny Adin'i Marcomannic; na izany aza, ireo sy ireo vahoaka alemà hafa dia nanomboka naneho zava-misy manahirana ny Empira. Nanova ny fahadiovan’ny volafotsy tamin’ny vola romanina izy, dia ny denaria. Toa nitombo ny fanenjehana ny Kristianina tany amin’ny Fanjakana Romanina tamin’ny andron’i Marcus, nefa tsy fantatra ny nandraisany anjara tamin’izany.
Nipoaka ny pesta Antonine tamin’ny taona 165 na 166 ary nandrava ny mponina tao amin’ny Fanjakana Romanina, ka nahafatesana olona dimy ka hatramin’ny folo tapitrisa. Maty tamin’ny areti-mandringana angamba i Lucius Verus tamin’ny 169. Tsy toy ny sasany tamin’ireo teo alohany i Marcus, fa nifidy ny tsy handray mpandova. Ny zanany dia nahitana an'i Lucilla, izay nanambady an'i Lucius, sy Commodus, izay nifandimby taorian'i Marcus dia niady hevitra teo amin'ireo mpahay tantara ankehitriny sy maoderina.
Mbola mijoro ao Roma ny tsangambato sy ny sarivongan'i Marcus Aurelius, izay nananganana azy ireo ho fankalazana ny fandreseny ara-tafika. Ny fisaintsainana, ny asa soratry ny "filozofa" - amin'ny maha mpanoratra tantaram-piainana ankehitriny antsoina hoe Marcus - dia loharano manan-danja amin'ny fahatakarana maoderina momba ny filozofia Stoika fahiny. Noderain’ny mpanoratra, filozofa, mpanjaka, ary mpanao politika namany izy ireo, taonjato maro taorian’ny nahafatesany.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Marcus Aurelius dia voatanisa etsy ambany.
"Mpiady tsara kokoa, fa tsy olom-pirenena tsara kokoa, olona tsara kokoa, loharano tsara kokoa amin'ny toerana tery, mamela heloka kokoa." - Marcus Aurelius
“Hevi-dehibe tokony hotadidina: miovaova arakaraky ny zava-kendreny ny sandan’ny fiheverana. Aleo tsy omena fotoana bebe kokoa noho izay mendrika azy ny zavatra kely.” - Marcus Aurelius
"Tsy maintsy mijoro mahitsy ny lehilahy, fa tsy ho voatazon'ny hafa." - Marcus Aurelius
“Ny lehilahy dia tokony hanana ireo fitsipika roa ireo amin'ny fahavononana. Voalohany, tsy manao afa-tsy izay soso-kevitry ny fahefanao manapaka sy manara-dalàna ho an'ny fanompoana ny olombelona. Faharoa, ny manova ny hevitrao isaky ny misy olona eo am-pelatananao dia manitsy anao sy mampikorontana anao amin'ny hevitra iray, fa izany fiovan'ny hevitra izany dia tokony ho tonga raha tsy hoe resy lahatra ianao fa marina ny zavatra iray na ho tombontsoan'ny besinimaro, fa tsy hoe miseho mahafinaritra na mampitombo ny hevitrao. laza.” - Marcus Aurelius
"Ny hasarobidin'ny olona dia tsy lehibe noho ny hasarobidin'ny faniriany." - Marcus Aurelius
"Matetika ny mpanao ratsy dia olona nandao zavatra iray, fa tsy hoe nanao zavatra foana." - Marcus Aurelius
"Ekeo ny zavatra mamatotra anao ny anjara ary tiavo ny olona izay mampiray anao ny anjara, fa ataovy amin'ny fonao rehetra izany." - Marcus Aurelius
“Ekeo izay rehetra tonga aminao voatenona araka ny lamin’ny anjaranao, fa inona no mety kokoa amin’izay ilainao?” - Marcus Aurelius
“Mampifanaraka ny tenanao amin’ny fiainana nomena anao; ary tena tiavo ireo olona izay nanodidina anao ny anjara”. - Marcus Aurelius
“Isika rehetra dia zavaboary amin'ny andro iray - ny mahatsiaro sy ny mahatsiaro. Ephemeral daholo ny zava-drehetra – sady fitadidiana no tadidy.” - Marcus Aurelius
"Manjavona ny zava-drehetra ary lasa angano haingana." - Marcus Aurelius
"Ny zavatra rehetra hatramin'ny mandrakizay dia mitovy endrika ary mihodinkodina." - Marcus Aurelius
“Ny zavatra rehetra ao amin’ny vatana dia mikoriana tahaka ny renirano, ary ny zava-drehetra ao amin’ny saina dia nofy sy fitaka; ady ny fiainana, ary famangiana any an-tany hafa; ny hany laza maharitra dia ny fanadinoana”. - Marcus Aurelius
“Ny ambiansy dia midika fa mamatotra ny mahasoa anao amin'izay lazain'ny olona na ataony. Ny fanaranam-po dia midika famatorana izany amin'ny zavatra mitranga aminao. Ny fahadiovam-pitondrantena dia midika fa mamatotra izany amin'ny ataonao manokana. " - Marcus Aurelius
“Ary amin'ny zava-miseho ambony toy ny kintana, dia mahita karazana firaisankina amin'ny fisarahana isika. Arakaraky ny ahazoantsika ny haavon'ny maha-izy antsika no mora kokoa ny manavaka fifandraisana na dia eo amin'ireo zavatra misaraka amin'ny halavirana lavitra aza. - Marcus Aurelius
“Tsy mety ho tsy marina ny fahatezerana.” - Marcus Aurelius
"Na aiza na aiza ahafahanao mitondra ny fiainanao dia afaka mitondra ny tsara ianao." - Marcus Aurelius
“Araka izay azonao atao, dia ataovy zatra manontany tena momba ny zavatra rehetra ataon'ny hafa: 'Inona no tiana holazaina eto?' Fa manomboha amin’ny tenanao, mandiniha tena aloha.” - Marcus Aurelius
“Aoka ianareo ho tahaka ny vatolampy izay ahintsanan’ny alon-drano mandrakariva; nefa mijoro mafy izy ka mahatohitra ny fahatezeran’ny rano manodidina azy”. - Marcus Aurelius
"Mandefitra amin'ny hafa ary hentitra amin'ny tenanao." - Marcus Aurelius
"Aoka ho tompon'ny tenanao ianao, ary jereo amin'ny maha-olombelona, ​​​​amin'ny maha-olombelona, ​​​​amin'ny maha-olom-pirenena, amin'ny maha-olombelona mety maty." - Marcus Aurelius
"Satria toa sarotra aminao ny zavatra iray, dia aza mihevitra fa tsy ho vitan'ny olona iray." - Marcus Aurelius
“Atombohy isan’andro amin’ny fitenenana amin’ny tenanao hoe: ‘Androany aho dia hihaona amin’ny fitsabahana, ny tsy fankasitrahana, ny fiavonavonana, ny tsy fivadihana, ny fanaovan-dratsy, ary ny fitiavan-tena’ – izany rehetra izany dia noho ny tsy fahafantaran’ireo meloka ny tsara na ny ratsy.” - Marcus Aurelius
“Safidio ny tsy haninona – dia tsy hahatsiaro ho voadona ianao. Aza mahatsiaro ho voadona – ary mbola tsy nisy ianao.” - Marcus Aurelius
“Mijanòna amin’izao fotoana izao.” - Marcus Aurelius
“Ny fahafatesana dia fanafahana avy amin’ny fitaoman’ny saina, sy amin’ny faniriana izay mahatonga antsika ho saribakoly, sy amin’ny fiovaovan’ny saina, ary amin’ny fanompoana mafy ataon’ny nofo.” - Marcus Aurelius
“Mitsiky amintsika rehetra ny fahafatesana; Ny hany azonay atao dia ny mitsiky.” - Marcus Aurelius
Mihady ao anaty - ny ao anatiny no loharanon'ny soa; ary vonona foana ny hiboiboika, raha mihady fotsiny ianao.” - Marcus Aurelius
"Ataovy ny asa rehetra eo amin'ny fiainanao ho toy ny hetsika farany amin'ny fiainanao." - Marcus Aurelius
“Aza manao toy ny ho velona iray alina. Miantona aminao ny fahafatesana. Raha mbola velona koa ianareo, dieny mbola eo am-pelatananareo, dia aoka ho tsara. - Marcus Aurelius
“Aza menatra ny manampy.” - Marcus Aurelius
“Aza manaram-po amin’ny nofinofy hanana izay tsy anananao, fa isao ny lehibe indrindra amin’ireo fitahiana izay anananao, ary avy eo dia tsarovy tsara ny fanirianao hahazo izany raha toa ka tsy anao izany.” - Marcus Aurelius
“Aza mihevitra fa izay sarotra fehezinao dia tsy hain’olombelona; ary raha azon’ny olombelona atao, dia hevero ho azonareo izany.” - Marcus Aurelius
“Ataovy izay tianao. Na dia misaraka aza ianao, ny ankamaroan'ny olona dia hanohy hanao zavatra mitovy. " - Marcus Aurelius
“Eritrereto ny hakanton’ny fiainana. Jereo ny kintana ary jereo ny tenanao mihazakazaka miaraka amin'izy ireo. " - Marcus Aurelius
"Ny zavamananaina rehetra dia tanteraka rehefa manaraka ny lalana marina amin'ny maha-izy azy." - Marcus Aurelius
"Ny zava-drehetra - soavaly, voaloboka - dia noforonina ho an'ny adidy sasany. Asa inona àry no namoronana anao? - Marcus Aurelius
“Ny zava-drehetra na inona na inona tsara tarehy dia manana ny hatsarany ho azy, manana ny maha izy azy ary mahavita tena. Tsy anisan’izany ny fiderana. - Marcus Aurelius
“Ny zava-drehetra dia zava-poana amin'ny traikefa, mandalo ny faharetany, maloto amin'ny votoaty; amin’ny lafiny rehetra amin’izao andro izao dia tahaka ny hitan’ny taranaka efa maty sy nalevina fa nisy izany.” - Marcus Aurelius
"Ny zavatra rehetra dia ho an'ny andro iray ihany - na izay tsaroana na izay tsaroana." - Marcus Aurelius
"Ny zava-drehetra izay misy dia araka ny fomban'ny voan'izay ho avy." - Marcus Aurelius
"Ny zava-mitranga rehetra dia mitranga araka ny tokony ho izy, ary raha mandinika tsara ianao dia ho hitanao fa izany no izy." - Marcus Aurelius
“Hevitra daholo ny zavatra renay fa tsy zava-misy. Ny zava-drehetra hitantsika dia fomba fijery fa tsy fahamarinana. " - Marcus Aurelius
"Na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra, dia manana safidy ianao: hanaiky ity hetsika ity amim-panetren-tena, hitondra an'io olona io araka izay tokony hitondrana azy, hanatona amim-pitandremana an'io eritreritra io, mba tsy hisy zavatra tsy mitombina." - Marcus Aurelius
"Ny laza aorian'ny fiainana dia tsy tsara noho ny fanadinoana." - Marcus Aurelius
"Satria azonao atao ny miala amin'ny tenanao na oviana na oviana." - Marcus Aurelius
"Fa ny fampisehoana ivelany dia mpamadika mahafinaritra ny antony." - Marcus Aurelius
"Atsaharo ny hetahetanao amin'ny boky, mba tsy ho faty mosary ianao." - Marcus Aurelius
“Manankarena be izy, tsy manana toerana hivarotana.” - Marcus Aurelius
“Indro misy fitsipika tokony hotadidina amin'ny ho avy rehefa misy zavatra maka fanahy anao halahelo mafy: tsy hoe: 'Loza ity, fa 'Ny mitondra izany amim-pahamendrehana dia vintana tsara.' - Marcus Aurelius
"Tsy mainka ve ny vokatry ny fahatezerana noho ny anton'izany." - Marcus Aurelius
"Tena mahatsikaiky sy hafahafa ny gaga amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana." - Marcus Aurelius
"Ny olombelona dia natao ho an'ny tsirairay, koa ampianaro izy, na mianara mitondra." - Marcus Aurelius
“Matetika aho no nanontany tena hoe ahoana no itiavan’ny lehilahy tsirairay ny tenany mihoatra noho ny olon-drehetra, nefa tsy manome lanja ny heviny momba ny tenany noho ny hevitry ny hafa.” - Marcus Aurelius
“Lehilahy tsara vintana aho taloha, saingy nandao ahy ny harena. Fa ny tena vintana tsara dia izay ataonao ho anao. Ny vintana tsara - ny toetra tsara, ny fikasana tsara ary ny asa tsara. " - Marcus Aurelius
“Raha tsy mety dia aza atao; raha tsy marina izany dia aza milaza izany. - Marcus Aurelius
“Raha misy afaka mampiseho amiko fa ny eritreritro na ny ataoko dia tsy mety, dia ho faly aho hiova, satria mitady ny fahamarinana aho, izay tsy nisy naninona na oviana na oviana. Ny olona manohy amin’ny famitahana ny tenany sy ny tsy fahalalam-pony no iharan’ny loza.” - Marcus Aurelius
“Raha misy mampahory anao noho ny zavatra ivelany, ny fanaintainana dia tsy avy amin’ny tenany, fa araka ny tombanao; ary azonao atao ny manafoana izany amin’ny fotoana rehetra.” - Marcus Aurelius
“Raha mampahory anareo ny zavatra ivelany, dia tsy ireny no manelingelina anareo, fa ny fitsaranareo azy ihany. Ary azonao atao ny mamafa izany fitsarana izany ankehitriny. - Marcus Aurelius
"Amin'ny fanehoana fankasitrahana marina, ny alahelo dia miharihary amin'ny tsy fisiany." - Marcus Aurelius
“Teo amin’ny fiainan’ny olona iray, dia vetivety ihany ny fotoany, ny fihetsehanany tsy an-kijanona, ny fahatsapany ho hazavan’ny hazavan’ny hazavan’ny andro, ny vatany ho rembin’ny kankana, ny fanahiny ho simba, ny fananany maizina, ny lazany mampisalasala. Raha fintinina, ny tena rehetra dia toy ny rano mandeha, ary izay rehetra ao amin’ny fanahy dia toy ny nofy sy zavona. - Marcus Aurelius
“Amin'ny maraina, raha mifoha tsy sitrakao ianao, dia aoka ho tonga izao hevitra izao: Mifoha ho amin'ny asan'ny olombelona Aho. Koa nahoana aho no tsy afa-po, raha hanao ny zavatra izay maha-izy ahy sy nahariana ahy ho amin’izao tontolo izao?” - Marcus Aurelius
“Mampihomehy ny olona tsy manidina amin’ny faharatsiany, izay azo atao tokoa, fa ny manidina amin’ny faharatsian’ny hafa, izay tsy azo atao”. - Marcus Aurelius
"Tsy ny fahafatesana no tokony hatahoran'ny olona, ​​fa ny hatahorany tsy mbola manomboka ho velona." - Marcus Aurelius
“Tsy ny fihetsiky ny hafa no manahiran-tsaina antsika - satria ireo fihetsika ireo dia fehezin'ny ampahany amin'ny fitondrany - fa ny fitsarantsika manokana. Noho izany, esory ireo didim-pitsarana ireo ary tapa-kevitra ny hamela ny fahatezeranao, dia ho foana izany. Ahoana no avelanao handeha? Amin'ny fahatsapana fa tsy mahamenatra anao ny fihetsika toy izany. " - Marcus Aurelius
“Azontsika atao ny tsy mitsara zavatra, ka tsy manelingelina ny saintsika; fa tsy misy manana ny fahefana hamolavola ny fitsarantsika”. - Marcus Aurelius
“Tiana ny hitranga.” - Marcus Aurelius
“Tsy azo resena ny hatsaram-panahy, raha tsy misy fandokafana na fihatsarambelatsihy. Fa inona no azon'ny lehilahy manambony tena indrindra aminao, raha miezaka ny ho tsara fanahy aminy ianao, ary raha manana fahafahana ianao, dia manoro hevitra moramora sy mampiseho azy amim-pahatoniana izay marina, ary manondro izany amin'ny fomba mandanjalanja sy amin'ny fomba fijery manerantany. Fa aza manao izany amin’ny fanesoana na ny fanalam-baraka, fa amin’ny fitiavana sy ny tsy fahatezerana ao amin’ny fanahinao. - Marcus Aurelius
"Tsy tsara na ratsy ny fiainana, fa toerana misy ny tsara sy ny ratsy." - Marcus Aurelius
"Ny fiainana dia hevitra." - Marcus Aurelius
“Miaina fiainana tsara. Raha misy andriamanitra ary marina izy ireo, dia tsy hiraharaha izay tena mpivavaka aminao izy ireo, fa handray anao araka ny hatsaran-toetra niainanao. Raha misy andriamanitra, nefa tsy marina, dia tsy tokony hiankohoka eo anatrehany. Raha tsy misy andriamanitra, dia ho lasa ianao, fa hanana fiainana mendrika izay hitoetra ao amin’ny fahatsiarovana ireo olon-tianao.” - Marcus Aurelius
“Ataovy amin’ny fahamarinana sy ny rariny ny fiainanareo, mandefitra amin’izay tsy marina na tsy marina.” - Marcus Aurelius
"Miverena any amin'ny lasa, miaraka amin'ireo fanjakana niova izay nitsangana sy nirodana, ary afaka mahita mialoha ny ho avy koa ianao." - Marcus Aurelius
“Jereo ny ambanin’ny tany; aza avela handositra anao ny toetra maromaro na ny hasarobidin’ny zavatra iray.” - Marcus Aurelius
"Tsy mijery na inona na inona, na dia indray mipi-maso aza, afa-tsy ny mieritreritra." - Marcus Aurelius
“Diniho tsara ny tenanao; misy loharanon’ny hery izay hipoitra mandrakariva raha mijery mandrakariva ianao.” - Marcus Aurelius
"Ny loza, teraka mendri-kaja, dia vintana tsara." - Marcus Aurelius
“Tsy misy ratsy noho izany, na tsara kokoa ny zavatra atao amin’ny fiderana.” - Marcus Aurelius
"Aza mihevitra na inona na inona ho tombony ho anao izay hahatonga anao handika ny teninao na hanary ny tenanao." - Marcus Aurelius
"Aza adino mihitsy fa izao rehetra izao dia zavamananaina tokana manana vatana iray sy fanahy iray - mitazona ny zava-drehetra mihantona ao amin'ny fahatsiarovan-tena tokana ary mamorona ny zava-drehetra miaraka amin'ny tanjona tokana mba hahafahan'izy ireo miara-miasa amin'ny fanodinana sy ny fanenomana ary ny fametahana izay mitranga. ” - Marcus Aurelius
“Aza avela hanelingelina anao mihitsy ny ho avy. Hihaona amin'izany ianao, raha tsy maintsy, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mitovy amin'ny saina izay mampiomana anao amin'izao fotoana izao." - Marcus Aurelius
“Aza manary na oviana na oviana ny fanahinao, na oviana na oviana ho tsara, tsotra na tsy voaloto. Miseho mihoatra noho ny vatana izay manodidina anao. " - Marcus Aurelius
"Tsy misy olona sambatra izay tsy mihevitra ny tenany ho toy izany." - Marcus Aurelius
“Tsy misy olona afaka manary ny lasa na ny ho avy – ahoana no ahafahan'ny olona tsy manana izay tsy ananany? Amin’izao fotoana izao ihany no mety ho very, ary raha izany ihany no ananany, dia tsy ho very izay tsy ananany izy.” - Marcus Aurelius
"Tsy misy mahavery aina afa-tsy izay iainany ankehitriny, ary tsy misy manana fiainana hafa afa-tsy izay ho very." - Marcus Aurelius
"Tsy misy na inona na inona mitranga amin'ny olona izay tsy mendrika hozakainy." - Marcus Aurelius
"Tsy misy mahamenatra noho ny olona mirehareha amin'ny fanetren-tenany." - Marcus Aurelius
"Tsy misy na aiza na aiza hahitan'ny olona fialan-tsasatra mangina na tsy misy korontana kokoa noho ny ao amin'ny fanahiny." - Marcus Aurelius
"Tandremo mandrakariva fa vokatry ny fiovana ny zava-drehetra, ary zatra mieritreritra fa tsy misy na inona na inona tian'ny natiora mihoatra noho ny manova ny endrika efa misy sy mamorona vaovao toa azy." - Marcus Aurelius
“Jereo ny fihetsehan’ny kintana toy ny hoe miara-mihazakazaka aminy ianao, ary aoka ny sainao hieritreritra tsy tapaka ny fiovan’ny singa tsirairay. Ny eritreritra toy izany dia manadio ny fahalotoan’ny fiainana amin’ny tany.” - Marcus Aurelius
“Mandehana amin’izao fotoana kely izao mifanaraka amin’ny zava-boahary, ary farano amin’ny fahafaham-po ny dianao, tahaka ny filatsahan’ny oliva rehefa masaka, ka tahio ny natiora izay namokatra azy, ary misaora ny hazo izay naniry azy.” - Marcus Aurelius
"Ny fitoniana tonga lafatra ao anaty dia ao anatin'ny fandaminana tsara ny saina - ny faritra misy anao." - Marcus Aurelius
"Ny fahatanterahan'ny toetra dia izao: miaina isan'andro ho toy ny farany ianao - tsy misy tabataba, tsy misy firaharahana, tsy misy fihatsarambelatsihy." - Marcus Aurelius
"Mahazoa tsy miavonavona, afaho tsy miady." - Marcus Aurelius
“Avereno ny sainao, miantsoa ny tenanao, ary mifohaza indray. Rehefa tsapanao izao fa ny nofinofy ihany no manahirana anao, dia jereo io 'zava-misy' io rehefa mijery ny nofinao ianao." - Marcus Aurelius
"Alaivo ny fahatsapanao ny ratra dia manjavona ny ratra." - Marcus Aurelius
"Tsarovy fa tsy misy anao afa-tsy ny nofonao sy ny ranao - ary tsy misy zavatra hafa eo ambany fifehezanao." - Marcus Aurelius
“Ataovy an-tsaina feno ny hatsarana anananao, ary amin'ny fankasitrahana, tsarovy ny fomba hanomananao azy ireo, raha tsy nanana izany ianao.” - Marcus Aurelius
“Izay tsy mety amin’ny andiam-be, ary tsy mety amin’ny tantely.” - Marcus Aurelius
“Izay tena tsara dia tsy mila na inona na inona; tsy mihoatra noho ny lalàna, tsy mihoatra noho ny fahamarinana, tsy mihoatra noho ny fiantrana na ny fahamaotinana.” - Marcus Aurelius
"Ny zavakanton'ny fiainana dia toy ny tolona noho ny dihy, raha toa ka mivonona hanohitra ny tsy nahy sy ny tsy ampoizina, ary tsy mety ho lavo." - Marcus Aurelius
"Ny valifaty tsara indrindra dia ny tsy hitovy amin'ny fahavalonao." - Marcus Aurelius
“Ny afo miredareda dia mahatonga lelafo sy famirapiratana avy amin’izay rehetra atsipy ao anatiny.” - Marcus Aurelius
“Ny fitsipika voalohany dia ny mitazona ny fanahy tsy mikorontana. Ny faharoa dia ny mijery ny zavatra amin’ny endriny ary mahafantatra azy ireo amin’ny maha-izy azy.” - Marcus Aurelius
“Tsy miankina amin’ny zavatra tsapany ny fahasambarana sy ny tsy fahasambaran’ny biby ara-tsosialy sy ara-tsaina, fa amin’izay ataony; tahaka ny hatsaran-toetrany sy ny faharatsiany tsy amin’ny fihetseham-po fa amin’ny fanaovany.” - Marcus Aurelius
“Miankina amin’ny hafa ny fahasambaran’ireo izay te ho malaza; ny fahasambaran'ireo izay mitady fahafinaretana dia miovaova amin'ny toe-po tsy voafehiny; fa ny fahasambaran’ny hendry kosa dia avy amin’ny fahalalahany”. - Marcus Aurelius
“Miankina amin'ny hatsaran'ny eritreritrao ny fahasambaran'ny fiainanao. Noho izany, mitandrema araka izany ary mitandrema mba tsy hisy hevitra tsy mifanaraka amin'ny hatsaran-toetra sy ny toetra amam-panahy. " - Marcus Aurelius
"Ny marina sy ny tsara fanahy dia tokony ho tahaka ny olona maimbo, ka raha vao manatona azy dia tsy maintsy manimbolo izay sitrany na tsia." - Marcus Aurelius
"Ny sakana amin'ny hetsika dia mandroso hetsika. Izay mahasakana no manjary lalana. ” - Marcus Aurelius
"Ny fahatsiarovana ny zava-drehetra dia tsy ho ela dia ho tototry ny fotoana." - Marcus Aurelius
"Ny tanjon'ny fiainana dia tsy ny hiandany amin'ny maro an'isa, fa ny handositra, hahita ny tenany eo amin'ny laharan'ny adala." - Marcus Aurelius
“Tsy azo ampitahaina amin’ny mozika sy ny vavaka ihany ny firaisana ara-nofo.” - Marcus Aurelius
“Lasa lokon’ny lokon’ny eritreriny ny fanahy.” - Marcus Aurelius
“Antomotra ny andro hanadinoanao ny zavatra rehetra; ary antomotra ny andro izay hanadinoan'ny olona rehetra anao. Eritrereto mandrakariva fa tsy ho ela ianao dia tsy ho iza ary tsy ho aiza.” - Marcus Aurelius
“Fiovana izao rehetra izao; ny fiainantsika no mahatonga ny eritreritsika.” - Marcus Aurelius
“Eritrereto hoe maty ianao. Efa niaina ny fiainanao ianao. Ankehitriny, raiso izay tavela ary iaino tsara. Izay tsy mampita mazava dia miteraka haizina ho azy manokana. - Marcus Aurelius
“Ny fotoana dia tahaka ny ony, izay ahitana ny zava-mitranga sy ny riaka mahery; fa raha vao hita ny zavatra iray, dia esorina izy, ary misy hafa tonga amin’ny fitoerany, ary izany koa dia hoentina. - Marcus Aurelius
"Ny fanenjehana ny tsy tratra dia adala, fa ny tsy misaina dia tsy afaka ny tsy hanao izany mihitsy." - Marcus Aurelius
“Ny famakiana amim-pahazotoana; tsy ho afa-po amin’ny fahalalana maivana sy tsy misy dikany, na hanaiky haingana ny zavatra ambara”. - Marcus Aurelius
"Anio aho dia afa-nandositra ny toe-javatra rehetra, na ny marimarina kokoa, nariako ny toe-javatra rehetra, satria tsy tany ivelany aho, fa tao anatin'ny fitsarako." - Marcus Aurelius
“Nandositra ny tebiteby aho androany. Na tsia, nariako izany, satria tao anatiko izany, araka ny fahitako azy, fa tsy tany ivelany. - Marcus Aurelius
“Tsy faly aho fa nitranga tamiko izany. Tsy izany, fa faly aho, na dia tonga tamiko aza izany, satria tsy misy fanaintainana aho, sady tsy kivy noho ny ankehitriny, na matahotra ny ho avy. - Marcus Aurelius
“Aza mandany andro miady hevitra momba ny tokony hataon’ny lehilahy tsara fanahy. Aoka ianao ho iray.” - Marcus Aurelius
"Isika no hafa amin'ny hafa." - Marcus Aurelius
“Ny zavatra tsy zakantsika dia manaisotra antsika amin’ny fiainana; izay sisa dia azo zakaina. - Marcus Aurelius
"Ny ataontsika ankehitriny dia manakoako any amin'ny mandrakizay." - Marcus Aurelius
"Na inona na inona atao na lazain'ny olona dia tsy maintsy emeraoda aho ary mitazona ny lokoko." - Marcus Aurelius
"Na inona na inona fotoana fidinao dia ny fotoana mety - tsy tara, tsy aloha." - Marcus Aurelius
“Rehefa misy hafa manome tsiny anao na mankahala anao, na miteny fanakianana mitovy amin'izany ny olona, ​​mandehana any amin'ny fanahiny, midira ao anaty ary jereo hoe karazan'olona manao ahoana izy ireo. Ho tsapanao fa tsy ilaina ny manahy ny amin'ny tokony hananany hevitra manokana momba anao. " - Marcus Aurelius
“Rehefa mampikorontana ny sainao ny herin'ny toe-javatra, dia aza manary fotoana hamerenana ny fifehezan-tenanao, ary aza mijanona ela kokoa noho izay azonao anampiana. Ny fiverenana mahazatra amin'ny firindrana dia hampitombo ny fahaizanao amin'izany. " - Marcus Aurelius
"Rehefa tsy maha-olombelona ny lehilahy dia mitandrema mba tsy hihevitra azy ireo tahaka ny ataon'ny olona hafa." - Marcus Aurelius
"Rehefa mifoha maraina ianao, eritrereto ny tombontsoa sarobidy ny miaina - miaina, mieritreritra, mankafy, mitia." - Marcus Aurelius
“Isaky ny hitady tsiny amin’ny olona iray ianao dia manontania tena izao fanontaniana manaraka izao: inona no fahadisoako saika mitovy amin’ilay hotsikeraiko?” - Marcus Aurelius
“Izay manao ratsy dia manao izay tsy marina amin’ny tenany; izay manao ny tsy rariny dia manao izany ho an'ny tenany ihany - manao ny tenany ho ratsy. - Marcus Aurelius
“Misy olona hanamavo ahy va? Avelao izy hijery izany. Fa hataoko antoka fa tsy ho hita manao na miteny izay tokony hatao tsinontsinona aho. - Marcus Aurelius
“Anao foana ny safidy tsy hanana hevitra. Tsy ilaina mihitsy ny miasa na manakorontana ny fanahinao amin'ny zavatra tsy azonao fehezina. Izany zavatra izany dia tsy mangataka ny hotsarainareo. Avelao izy ireo. - Marcus Aurelius
“Fanahy kely mitondra faty ianao, araka ny voalazan’i Epictetus taloha.” - Marcus Aurelius
“Manana fahefana amin'ny sainao ianao - fa tsy hetsika ivelany. Fantaro izany dia hahita hery ianao. - Marcus Aurelius
"Mila misoroka ny zavatra sasany amin'ny eritreritrao ianao - ny zava-drehetra tsy misy dikany, ny zava-drehetra tsy misy dikany, ary azo antoka fa ny zava-drehetra manan-danja na ratsy." - Marcus Aurelius
« Voaisa ny andronareo. Ampiasao izy ireo mba hanokafana ny varavarankelin'ny fanahinao amin'ny masoandro. Raha tsy manao izany ianao, dia hilentika tsy ho ela ny masoandro, ary ianao miaraka aminy. - Marcus Aurelius
Vondrona asa, karama ary tambin-karama any Kenya 2022